လူဦးရေတစ်ဝက်လောက်က အမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတာကို ကိုယ်တို့ဟာ တစ်လတစ်ခါရာသီလာတာကို ဖုန်းကွယ်စရာ လိုလို့လား? – Purple Feminist Group
Homeလူဦးရေတစ်ဝက်လောက်က အမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတာကို ကိုယ်တို့ဟာ တစ်လတစ်ခါရာသီလာတာကို ဖုန်းကွယ်စရာ လိုလို့လား?
ကြီးလာတဲ့အခါကျမှဒါဟာ သဘာဝပဲ၊ တစ်လတစ်ခါ ကလေးမရတဲ့အခါ Uterus Lining ကနေ ကြွေကြလာတဲ့ သွေးလေးတွေပဲဆိုတာသိရတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အမေတွေ၊ ညီမတွေ၊ အဒေါ်တွေက ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေကို Period ကြောင့် Negative မခံစားရအောင်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တတ်အောင်၊ Positive ဖြစ်အောင် သင်ပေးတတ်ရမယ်။ အမျိုးသမီးအချင်းချင်း ယောက်ျားတွေထက်ငါတို့က နိမ့်ပါးတယ်၊ ညစ်ပတ်တယ်လို့ခံစားရအောင် မဆွဲချရဘူး။
ကိုယ်ဟာ သူများနဲ့ယှဉ်ရင် Period ကိစ္စမှာ နည်းနည်းပိုကံကောင်းတယ်တော့ထင်မိသား၊ ရက်လဲမကြာဘူး၊ ဗိုက်လဲသိပ်မနာဘူး။ ဒါပေမယ့်နာလိုက်ပြီဆိုရင်လဲ ဗိုက်ထဲကလာညစ်နေသလို လူးလှိမ့်ခံရပြန်ကော။
၇ တန်းလောက်မှာ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် Period စလာတယ်၊ အဲ့အခါမှ period ဆိုတာဘာမှန်းသိတယ်။ ကိုယ့်အိမ်က ဒီကိစ္စတွေကိုဘာမေးမေးမပြောပြဘူး၊ ကြီးလာမှသူငယ်ချင်းတွေဆီကနည်းနည်းပါးပါးသိလာတယ်။
သူငယ်ချင်းကိုမေးတယ် ဘယ်လိုခံစားရလဲ၊ သူကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး ရှုရှုးပေါက်နေသလိုပဲလို့ပြန်ဖြေတယ်။ အဲ့အထဲက Period စလာမှာကိုကြောက်တယ်။ ကြောက်လို့လားတော့မသိဘူး သူငယ်ချင်းတွေအကုန် စဖြစ်ပြီးတာတောင် ကိုယ့်မှာက မစသေးဘူး။ အဲ့တုန်းကလဲ ငါတစ်ခုခုမှားနေပြန်လားဆိုပြီးကြောက်ရသေးတယ်။
Period စဖြစ်ပြန်တော့လဲ စိတ်ညစ်ရပြန်ရော၊ Pad ခံရတာဟာ စိုထိုင်းထိုင်းနဲ့ ပူအိုက်လောင်ကျပ်နေကော၊ အဲ့ရက်တွေဆိုအရမ်းစိတ်ဆင်းရဲရတယ်။ အသက်ကြီးလာတဲ့အထိ ဘယ်တော့မှလဲဒီကိစ္စကို နေသားမကျသေးဘူး။
ပြီးတော့ ကိုယ်က လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေဆိုင်မှာဝယ်တဲ့အခါ အိတ်အမည်းနဲ့ထည့်ပေးတာကိုသိပ်မုန်းတာ၊ ယောက်ျားကြီးတွေရောင်းတဲ့အခါ ကိုင်ချင်သလို မကိုင်ချင်သလို ရွံစရာပစ္စည်းလိုသဘောထားတာမကြိုက်ဘူး။ သူတို့က အိတ်အမည်းကို ယောက်ျားလေး အရက်ဝယ်တဲ့အခါနဲ့ မိန်းကလေးလစဉ်သုံးပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါပဲသုံးတာ။
ယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့ အိတ်အမည်းနဲ့ဖုန်းကွယ်ရမှာက အရက်ပုလင်းဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးတွေကျ Pad ထုတ်ဆိုတော့ မကျေနပ်ဘူးလေ။ ဖုန်းကွယ်နေစရာလိုတယ်လို့လဲမထင်လို့ အိတ်အမည်းနဲ့ မပေးနဲ့ ဒီတိုင်းကိုင်မယ်လို့ ရွဲ့ရတာလဲ ခဏခဏ၊ လက်ထဲကိုင်လာတာကိုလမ်းကလူတွေက ခိုးကြည့်လဲ ခပ်တည်တည်ပဲ။
မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ လစဉ်သုံးပစ္စည်းဟာ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာလဲသိသင့်တယ်။ Pad တွေအပြင် Tampons နဲ့ Menstrual Cup တွေလည်းရှိတယ်။ Period Pants နဲ့ ပြန်လျှော်လို့ရတဲ့ အဝတ်တွေလည်းရှိတယ်။ Pad တွေက နေလို့မကောင်းရင်မသုံးပါနဲ့။
ကိုယ်ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးလ လောက်ကစပြီး Tampons စသုံးတယ်။ သူက Vagina အထဲကိုထည့်တဲ့ ဝါဂွမ်းမျိုးပေါ့။ တအားသေးတယ်၊ ရှည်ရှည်မျောမျောလေး။ အဲ့တာစသုံးထဲက ကိုယ့်မှာ အင်မတန်နေလို့ကောင်း၊ ရေလဲကူးလို့ရတယ်။ Pad ဆိုတာဘယ်တော့မှကိုမသုံးချင်တော့တာ။ Tampons စသုံးတာဟာ ဘဝရဲ့ အမှန်ကန်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်လို့တောင်ထင်သေး။ ဒါပေမယ့် သူက Toxic Shock Syndrome ဖြစ်တတ်တော့ ညအိပ်တော့သုံးလို့မဖြစ်ဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် Product ပြောင်းသုံးမယ်ဆိုသေချာ စာရှာဖတ်ဖို့လဲလိုသေးတယ်။
ဒီစာကိုဖတ်နေရင်း ဒီကောင်မလေး period အကြောင်းတွေပြောနေတယ် မရှက်ဘူးလားမသိဘူး လို့တွေးနေရင် ခင်ဗျားက စိတ်ဓာတ်မပြည့်ဝဘူးလို့ယုံ။ သဘာဝ အလျှောက်ဖြစ်နေတာကို သဘာဝပဲလို့တွေးဖို့လိုတယ်မဟုတ်လား။
မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ နိုင်ငံမလို့ လို့အပြစ်မတင်ချင်ပေမယ့် ဒီနိုင်ငံကလူအများစုက အမျိုးသမီးနဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စကို မပွင့်လင်းသေးတဲ့အပြင် ရှက်စရာ ဖုံးကွယ်စရာလို့သတ်မှတ်နေကြတုန်း။ အဲ့အထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင် ပါ ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ကျန်းမာရေးအသိတွေနဲ့ Sex Education က သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။
ကမ္ဘာ့လူဦးရေတစ်ဝက်လောက်က အမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတာကို ကိုယ်တို့ဟာ တစ်လတစ်ခါရာသီလာတာကို ဖုန်းကွယ်နေစရာ လိုလို့လား?